रुपन्देहीको सैनामैनामा रहेको आँधिखोला—बैकुन्ठपुरबाटो सिलान्यास
रेडियो टाइम्स सोमबार, चैत ९, २०७७, २२:२३:००
रुपन्देहीको सैनामैना वडा नं. ६ स्थित आँधिखोला—बैकुन्ठपुर टोलको बाटो सिलन्यास गरिएको छ । लुम्विनी प्रदेशका संसद तथा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले एक कार्यक्रमका विच सो बाटोको शिलान्यास गर्नु भएको हो ।
समुदायको माग बमोजिम विकास निर्माणका कार्य गरिएको संसद ढकालले बताउनु भयो । लुम्बिनी प्रदेशमा विकासका गतिविधिले तिब्रता लिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो—“हामीले स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारको सहकार्यमा विकासका काम गरिरहेका छौं, चुनावमा गरिएका बाचा विर्सेका छैनौं ।” ढकालले रकम अभावका कारण कुनै पनि योजना प्रभावित नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो—“प्रदेश र संघिय सरकार कुनै हालतमा ढल्दैन ।”
गुणस्तरिय काम हुनु पर्ने, स्थानीयस्तरमा भएका योजनाका कामहरुको स्थानीयहरुले अनुगमन गर्नुपर्ने सैनामैना नगरपालिका उपप्रमुख विना रानाले बताउनु भयो । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भैसके पछि सैनामैना नगरपालिकामा ठुला तथा साना योजनाहरुको काम धेरै भैरहेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सैनामैना वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष वसन्त पाण्डे, नेकपा एमालेका क्षेत्रीय संयोजक नरबहादुर घर्ती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष भोजराज न्यौपाने लगाएतले स्थानीयको माग अनुसार काम गर्नु पर्ने कुरा बताउनु भयो । बाटो पिंच गर्नका लागि प्रदेश सरकारको ६० लाख रकम विनियोजन विनियोजन भएकोमा ३५ लाख रकममा स्वास्थिका सफल निर्माण सेवा कम्पनीले ठेक्का लिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ९, २०७७, २२:२३:००
रसुवामा टिपर दुर्घटनामा परी २ जनाको मृत्यु सोमबार, चैत ९, २०७७, २२:२३:००
बागलुङका ३० वनमा आगलागी,लाखौँको क्षति सोमबार, चैत ९, २०७७, २२:२३:००
हेटौंडाबाट २३ किलो गाँजासहित तीनजना पक्राउ सोमबार, चैत ९, २०७७, २२:२३:००
लुम्बिनीमा वैकल्पिक सरकारको कसरत , कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सोमबार, चैत ९, २०७७, २२:२३:००